गगन थापा भन्नुहुन्छ : ८ बजेपछि को’रोना बढ्ने अनि बिहान घट्ने यो कहाँको अध्ययन हो ?
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले राति ८ बजेपछि सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले ८ बजेपछि काठमाडौंलगायतका ठाउँमा को’रोनाको सं’क्रमण बढ्ने र बिहान घ’ट्ने कहाँको अध्ययन हो भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले भने, ‘८ बजेपछि काठमाडौंलगायत ठाउँहरूमा संक्र’मण बढ्दै जाने अनि बिहान संक्र’मण घट्दै जाने यो अध्ययन कहाँ भएको हो ?’सांसद थापाले खोपको काम प्रशंसायोग्य रहेको भन्दै खोप व्यवस्थापन यति धेरै कमजोर किन ? भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले को’रोना संक्रमण वृद्धि भइरहेको बेला भौतिक रूपमा विद्यार्थीलाई उपस्थित गराएर परीक्षा भइरहेको र संक्रमित विद्यार्थीहरू पनि अरूसँगै बसेर परीक्षा दिइरहेकोले संक्र’मण बढ्न सक्ने बताए ।नेता गगन थापाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो उपचारमा सरकारको ढुकुटी रि’त्याएको किन बिर्सेको? भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा थापाले भने, साउन २६ गते ओलीले प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा बोल्नुभयो। उहाँलाई प्रतिपक्षी भूमिकामै सुहाउने रहेछ। तर, सम्बोधनमा उहाँको आ’क्रोश, कु’ण्ठा, अ’हंकार स्पष्ट देखिन्थ्यो।’
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतको भूमि फिर्ता ल्याउन सिंगो संसद्ले साथ दिएर संविधान संशोधन गर्दासमेत ओलीले केही गर्न नसकेको उनले आरो’प लगाए। थापाले भने, ‘उहाँले भूमि फिर्ता कहिले ल्याउनुहुन्छ ? भन्दै गर्दा सिंगो संसदले साथ दिएको उहाँले बिर्सिनुभयो।
उहाँले पहलको नाममा टेलिफोन वार्ता गर्नुभएको रहेछ। उहाँले १६५ सांसद हुनुहुन्छ? एमसिसी के गर्नुहुन्छ? भन्दै गर्दा उहाँसँग पनि बहुमत थियो नी त्यति बेला के गर्नुभयो?’
ओलीले संसदमा उभिएर भ्रष्टचारको कुरा गर्दा नसुहाएको बताए। भ्रष्टाचारको का’ण्ड ढाकछोप गर्नमा सबैभन्दा धेरै ओली नै जिम्मेवार भएको उनको भनाइ छ। ओलीले पञ्चायतपछि पहिलो पटक सत्तामा बसेर श’क्ति प्रदर्शन गरेको जिकिर गरे। ओलीकै अ’हंकारको कारणले गठबन्धन जन्मिएर सत्ताच्युत गरेको समेत थापाले आरोप लगाए।
गगनले प्रश्न गर्दै भने, ‘घा’इतेहरूलाई उपचारको लागि पार्टी कार्यालयमा आऊ भन्दै गर्दा आफ्नै उपचारमा सरकारी ढुकुटी रि’त्याएको किन बिर्सेको? उहाँको प्रश्नमा आ’क्रोश, कु’ण्ठा थियो। प्रतिपक्षले गरेको प्रश्न नै थियो। अब सरकारले जवाफ कामबाट दिनुपर्छ।’
जनताले सरकारले गरेको विकासको कामलाई मात्रै देख्ने भएकाले काममा लाग्न आग्रह गरे। सरकार गठन भएको एक महिना भइसक्दा समेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएकोप्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति पनि असन्तुष्टि प्रकट गरे। खोपमा सरकारले गरेको पहल उप’युक्त भए पनि तयारीबारे सरकारको पहलबारे प्रश्न उठाए।
२०७८ श्रावण २८, बिहीबार २०:४२ गते 1 Minute 1285 Views
अध्यक्ष लिङ्देन भन्नुहुन्छ : अवैध सम्पत्ति जफत गरे हुन्छ, एमसिसी ल्याउनैपर्दैन ।
चित्रबहादुर केसी भन्नुहुन्छ : अनुदानको नाममा साम्राज्यवादी शक्ति अमेरिकाको षडयन्त्रमा नेपाल फस्नु हुदैन ।
निखिल उप्रेती भन्नुहुन्छ : हजारौं भ्रष्टा-चारी नेता पाल्नु भन्दा, एउटै राजा पालौं, देशले चाँडै बिकासको कोल्टे फेर्छ ।